မယုံနိုင်စရာကောင်းသည့် Great Dane Chihuahua ရောခွေးနှင့်တွေ့ဆုံပါ - Breeds
မယုံနိုင်စရာကောင်းသည့် Great Dane Chihuahua ရောခွေးနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Chihuahua နှင့် Grand Dane တို့၏အလွန်သေးငယ်သောအရာတို့ကိုသင်စဉ်းစားမိသောအခါထိုနှစ်မျိုးလုံးသည်အတူတကွရပ်တည်ရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သောခွေးတစ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ပြီးပြီ ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Chi-Dane-Dane ဒါမှမဟုတ် ဂရိတ်မက္ကဆီကန်ခွေး ဤပေါင်းစပ်မှုသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။
အရှည်ဆုံးခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Great Dane နှင့်အသေးဆုံးခွေး Chihuahua
Great Dane Chihuahua ရောနှောခြင်းအကြောင်းကိုသင်သိထားသင့်သောအရာများကိုရှာဖွေရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: Chi-Dane-Dane ဆိုတာဘာလဲ။
Dane နဲ့ Chihuahua အကြားရောနှောလို့ရမလား။
Great Dane Chihuahua ရောနှောခြင်းသည်မည်သို့သောပုံသဏ္?ာန်ဖြစ်သနည်း
temperament: Chi-Dane-Danes သည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကောင်းများရနိုင်မလား။
ဒီ Chihuahua-Great Dane ရောစပ်မှုကိုဂရုစိုက်ရန်ခက်ခဲပါသလား။
ကျန်းမာရေး - Great Dane Chihuahua ရောစပ်ခြင်းသည်အသက်ရှည်ပါသလော။
ရောင်းရန် Great Dane Chihuahua ရောနှောကိုရှာနေသည်
Great Dane Chihuahua ရောနှောခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစီရင်ချက်
နာမတော်၏အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း, ဒီဒီဇိုင်နာခွေးဂရိတ် Dane နှင့်ချီဟွာဟွာအကြားရောနှောဖြစ်ပါတယ် အများဆုံးရောနှောဝတ်ရည်ကဲ့သို့ပင်, သူတို့တိကျစွာဖန်တီးခဲ့သည့်အခါအပေါ်အများကြီးသမိုင်းသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများမရှိ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, မိဘတစ် ဦး ချင်းစီကိုသိကျွမ်းခြင်းကသူတို့၏မျိုးစပ်မျိုးဆက်များကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အားလုံးအနက်အမြင့်ဆုံးခွေး - Great Dane
ဒီနေ့ဂရိတ် မှန်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားလူသိများ ။ သို့သော်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်ဖော်ရွေ၊ စိတ်ရှည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သူတို့၏အမည်ပြောင်များဖြစ်သော“ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောGရာမ” သို့မဟုတ်“ အပိုလိုတို့၏ခွေးများ”
ဒီမြင့်မြတ်ပြီးနိုးနိုးကြားကြားရှိတဲ့ fido ဟာ ၁၆၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာပါ။ ဂျာမန်များက၎င်းတို့အိပ်ပျော်နေစဉ်တွင်ချီးမြှင့်ငွေကိုကာကွယ်ရန်မွေးမြူခဲ့ကြသည်၊ ၎င်းက“ Chamber Dogs” ဟူသောနောက်ထပ်အမည်ပြောင်ကိုပေးခဲ့သည်။
ဂရိတ်ဒိန်းတွေဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေးနေသလား။ သူတို့မှာအမြင့် ၂၈ မှ ၃၄ လက်မ (၇၁ မှ ၈၆ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန် ၁၀၀ မှ ၁၇၅ ပေါင် (၄၅ မှ ၇၉ ကီလိုဂရမ်) ရှိသည်။ အချို့သည်ပေါင် ၂၀၀ (၉၁ ကီလိုဂရမ်) အထိကြီးမားနိုင်သည်။
အဆိုပါသေးငယ်သော Chihuahua သေးငယ်တဲ့
ကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးငယ်ဆုံးခွေးမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ Chihuahua နဲ့တွေ့ဆုံပါ
ရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်, ပိုက်ဆံအိတ်အရွယ် Chihuahua ဟုတ်တယ် အသေးဆုံးခွေးဖောက် ။
သေးငယ်တဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့ Chihuahuas မှာအကျင့်စရိုက်တွေရှိတယ်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းအချုပ်အခြာအာဏာကိုရှုပ်ထွေးစေလိုပြီးချိုသာသောအပေါင်းအဖော်များဖြစ်သည်။
သူတို့ဟာလူသိများတဲ့ခွေးကြီးတွေလိုခံစားရတယ် အသေးစားခွေး Syndrome ဒါမှမဟုတ် နပိုလီယံ Complex , အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်!
သင်ရှာလိုရသည် မက္ကဆီကို၏အမျိုးသားရေးသင်္ကေတ နှင့်အတူ ပန်းသီးခေါင်းသို့မဟုတ်သမင်ခေါင်း ။ အချို့မှာအမွေးရှည်များရှိပြီးအချို့မှာအမွေးတိုများရှိသည်။
သူတို့ကအများအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့နားရွက်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့၊ သူတို့ဟာ ၆ လက်မမှ ၁၀ လက်မ (၁၅ မှ ၂၅ စင်တီမီတာ) ခန့်ရှိပြီး ၃.၅ မှ ၇.၅ ပေါင် (၂ မှ ၃ ကီလိုဂရမ်) လေးသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာအတော်လေးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂရိတ်ဒိန်းနှင့်ချီတို့အကြားအရွယ်အစားကွာခြားချက်ကဒီဒီဇိုင်နာခွေးကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျန်းမာတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
Chihuahua ဂရိတ် Dane ရောနှောခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
အဘို့အသွား သဘာဝမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစဉ် မေးခွန်းထဲကကျိန်းသေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသူဟာတိရစ္ဆာန်အလွဲသုံးစားမှုကိုလုပ်နေတာပဲ ။ Chihuahua အမျိုးသမီးကိုတပ်ဆင်သည့် Great Dane အထီးကိုစဉ်းစားခြင်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Chi အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကြီးမားသောခွေးပေါက်စများကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်မိခင်နှင့်သူ၏ကလေးငယ်များသေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သငျသညျကျား, မပြောင်းပြန်ရင်တောင် Chihuahua အထီးဖြစ်နိုင်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ဖို့ဂရိတ် Dane အမျိုးသမီးမရောက်ရှိနိုင်ပါ။
သတိပေးချက် - ဤဗီဒီယိုတွင်အထိခိုက်မခံသောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားသော Dane နှင့်အကြီးမားဆုံးနှင့်အသေးငယ်ဆုံးမျိုးနွယ်ဖြစ်သောချီဟွာဟွာလူမျိုးတို့သည်သဘာဝအားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မယှဉ်နိုင်ကြောင်းကိုပြသသည်။
သငျသညျစဉ်းစားစေခြင်းငှါ - 'ရှိပါတယ် အတုသုက်ပိုး (AI) အခုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ၎င်းသည်မျိုးပွားခြင်း၏သဘာဝပုံစံများကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးသည်။
ဒီမျိုးပွားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို Great Dane Chihuahua ရောနှောဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
သူတို့ဟာ Chihuahua ကိုအတုလုပ်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောခွေးပေါက်စများမွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အလားတူပြproblemနာသည်လည်းအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
C-section သို့မဟုတ် cesarean လုပ်ရင်တောင်မိခင်နှင့်သူမ၏အမှိုက်သရိုက်များသည်များသောအားဖြင့်သေဆုံးသည်။
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောထိုအနည်းငယ်သောချီဟွာအတ်လူမျိုးများအတွက်နောက်ထပ်ရုန်းကန်မှုမှာသူတို့၏ကလေးငယ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ပိုင်ရှင်များနှင့်မျိုးဆက်များသည်ကလေးများအားလက်ဖြင့်ကျွေးရမည် ။
ခွေးငယ်များသည်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများမှာပါးလွှာသော်လည်း၊ မျိုးဗီဇဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ ထို့အပြင်ပြanနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Great Dane Chihuahua ရောနှောခြင်းသည်မည်သို့သောပုံသဏ္?ာန်ဖြစ်သနည်း။
သူတို့ရဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ Great Dane Chihuahuas ရဲ့ကြီးထွားလာသောစင်မြင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့မှာခေါင်းကြီးကြီးမားတဲ့ ထီးနန်း ။
သူတို့ကအတန်ငယ်တူသည် Dachshund သူတို့ရဲ့ရှည်လျားသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခြေထောက်တိုတိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူတို့အင်္ကျီနှင့်အရောင်နှင့်ပတ်သက်လျှင်, သူတို့ကမည်သည့်သားမွေးအမျိုးအစားကိုအမွေနှင့်သူတို့၏မိဘများအရိပ်အမွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Chihuahua ရဲ့မိဘကရှည်လျားသောအင်္ကျီကိုဖွင့်လျှင်ကပိုရှည်အင်္ကျီကိုရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်အစား - ကြီးသော Dane & Chihuahua လက်ဝါးကပ်တိုင်သည်မည်မျှကြီးမားသနည်း။
၎င်း၏မိဘဝတ်ရည် '' အရွယ်အစားအကြားကြီးမားသောကွာဟမှုနှင့်အတူ, ဒီဒီဇိုင်နာခွေးရဲ့အမြင့်နှင့်အလေးချိန်ကိုခန့်မှန်းရန်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ရရှိလာတဲ့ကြက်တူရွေးသည်များသောအားဖြင့် Chihuahua အရွယ်အစားနှစ်ဆရှိသော်လည်းမဟာ Dane ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်။
သူတို့ကကြီးမားသောမဟုတ်သောကြောင့်, အပြင်, သူတို့ကအကြီးတိုက်ခန်းခွေးပါစေ။
အဆိုပါ Chihuahua နှင့်ဂရိတ် Dane နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ကြသည် သစ္စာစောင့်သိခွေးတစ်ကောင် သူတို့ရဲ့စပ်အမျိုးအနွယ်ကိုအမွေခံရနိုင်သည့်။ သူတို့ပါပဲ ဖော်ရွေများနှင့်ချစ်ခင် သင်နှင့်အတူ cuddling ပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုဒီဇိုင်နာခွေး။
သို့သျောလညျး, ငါတို့ကသူတို့လမ်းမရကြဘူးအထူးသဖြင့်အခါ, Chihuahua ရဲ့ပြင်းထန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ Chi-Dane-Danes ဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ရက်စက်နှင့်မကြောက်တရား ဘယ်အချိန်မှာ ဒါကသူတို့ကိုကောင်းတဲ့စောင့်ကြည့်သူဖြစ်စေတယ်။
သူတို့မှာရှိတယ် အသေးစားခွေး Syndrome Chihuahuas နှင့်အခြားသေးငယ်သောမျိုးပွားများကသူတို့အရွယ်အစားကိုမသိသောကြောင့်၎င်းင်းတို့လူသားများကိုလုံခြုံရန်အတွက်လုပ်သမျှကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
Great Dane Chihuahua ရောနှောခြင်းသည်အတော်လေးအားကောင်းနိုင်သည်။ တစ်ချိန်ကအမျက်ဒေါသ, သူတို့ စီမံခန့်ခွဲရန်စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ် , ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှစောစောစီးစီးလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာနာခံမှုသင်တန်းပါဝင်တယ်။
မဟာ Dane & Chihuahua လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့် ကဗျာ။ မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအလေ့အကျင့်များဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လျင်မြန်စွာပြေးလွှားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ခြံဥယျာဉ်သည်ဤရောနှောထားသောသားအိမ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်အတွက်လုံလောက်လိမ့်မည်။
သူတို့ရဲ့အစားအစာအတွက်, များသောအားဖြင့်တစ် ဦး နှုန်း - ခွေးအခြေခံပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ဂရိတ်မက္ကဆီကန်ခွေး၏အလေးချိန်၊ အသက်၊ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်မူတည်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သော kibbles များကိုသင့်အားအကြံပြုပါသည် ပူးတွဲဖြည့်စွက် - ငါးဆီ၊ chondroitin နှင့် glucosamine ပါသည့်။
ဆိုလိုသည်မှာ အစာကျွေးခြင်းသည်လည်းမလုပ်နိုင်ပါ ။ ဖွားသားမွေးကလေးငယ်များသည်ချစ်စရာကောင်းသော်လည်းရောဂါများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားပေးသောနို့တိုက်ကျွေးရေးအကြံဥာဏ်သည်ဤကြက်တူရွေးမျိုးစပ်ခြင်းအပေါ်အရိပ်အမြွက်ပြခဲ့လိမ့်မည်။ ဟုတ်တယ်၊ မှန်ပါတယ်။ တံတောင်ဆစ်နဲ့ တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia ။
ဤသည် fido လည်း Chihuahua နှင့်ဂရိတ် Dane မှ predisposed သောကျန်းမာရေးပြproblemsနာအချို့ကိုအမွေနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများဖြင့်သင်၏ Chi-Dane-Dane သည် ၄ ​​င်း၏မိဘများ၏သက်တမ်းအကွာအဝေးအတွင်းသက်တမ်းကိုခံစားသင့်သည် ။
ချီဟွာဟွာသည် ၁၂ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိနေထိုင်နိုင်ပြီးမဟာ Dane သည် ၇ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အထိဖြစ်သည်။
သင်ဤဒီဇိုင်နာ pooch ကို ၀ ယ်လိုပါက Great Dane Chihuahua ရောစပ်သည့်ခွေးပေါက်စနှင့်အတူဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးဆက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း မှလွဲ၍ သင်သည်ခွေးများနှင့်အမှိုက်သရိုက်များမည်မျှကျန်းမာကြောင်းရှာဖွေရန်နှင့်ခွေးများကိုသုတေသနပြုရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်။
Great Dane နှင့် Chihuahua ကိုဖြတ်ကူးခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်အန္တရာယ်များကြောင့်အလွန်ရှားပါးသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးမနေသင့်!
Great Dane Chihuahua သည်မျိုးဆက်များနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးများကိုရောနှောခဲ့သည်
ဂရိတ် Dane Chihuahua ရောစပ်သည့်ခွေးပေါက်စများကိုရောင်းချနေကြသော်လည်းတိတိကျကျမျိုးပွားမည့်သူသို့မဟုတ် kennel ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ၊ သို့သော်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကိုစစ်ဆေးသည်မှာအဖိုးထိုက်သည်။
သူတို့က Great Dane နှင့် Chi ကဲ့သို့သော purebreds များအပြင်သူတို့၏မျိုးစုံမျိုးစုံကိုဖြည့်တင်းသည်။
အကယ်၍ သင်အနီးအနားရှိဒေသခံအမိုးအကာကိုစစ်ဆေးပြီးပြီဆိုလျှင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်အစကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့မှာကလေးမွေးစားဖို့ Chi-Dane-Dane မရှိဘူးဆိုရင်အမွေးအမွေးရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုသင်မြင်ရမှာပါ။
ကျောက်တောင် Great Gane Dane ကယ်ဆယ်ရေး (Lakewood, CO)
San Antonio တွင်ဂရိတ် Dane ကယ်ဆယ်ရေး (ပိုက်ချောင်း၊ တက္ကဆပ်)
Enchantment Chihuahua Rescue, LTD ။ (Albuquerque, nm)
Limbo Chihuahuas & Chihuahua ရောနှောကယ်ဆယ်ရေး (South Pasadena, FL)
Dane သည် Chihuahua ကိုစုပ်ယူနိုင်သလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Chihuahua ရဲ့အမေနဲ့ခွေးကလေးတွေဟာကိုယ် ၀ န်ကိုယ်နှိုက်ကိုရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူမရင်တောင်ပုံမှန်မွေးဖွားချိန်နှင့် cesarean (CS) နှစ်မျိုးစလုံးကိုမွေးဖွားဖို့အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဤပေါင်းစပ်မွေးမြူခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းမှာဂရိတ် Dane မိခင်ဖြစ်သူရှိရာအတုသုတ်သင်ခြင်း (AI) မှတဆင့်ဖြစ်သည်။
ခွေးကလေးတစ်ကောင်ကပိုကြီးတဲ့မျိုးနွယ်နဲ့မိတ်လိုက်လို့ရမလား၊ အဖြေကဟုတ်လားလို့မေးတယ်။ ၎င်းသည်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးကိုပင်အလုပ်လုပ်သော်လည်းခွေးတစ်ကောင်သည်မိန်းမဖြစ်သည့်သေးငယ်သောခွေးတစ်ကောင်အတွက်အမြဲတမ်းပြwillနာရှိနေလိမ့်မည်။
Chihuahua ကို Great Dane နှင့်ရောစပ်ရန်ဇီဝဗေဒအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိမေးခွန်းများစွာထွက်ပေါ်လာသည်။
နောက်ဆုံးတွင် Dane နှင့် Chi အားအတူတကွမွေးမြူခြင်းကပြissuesနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ဤရောနှောမျိုးနွယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူများသည်သူတို့၏သားမွေးများ၏ရည်းစားနှင့်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။
Great Dane Chihuahua ရောနှောမှုကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်ကိုချန် ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ
half border collie half lab
golden retriever နှင့် cocker spaniel ရောစပ်ထားသောခွေးပေါက်စများ
feist jack russell ရောနှောထားသောတောင်